अमेरिकामा कमाउनेलाई पनि नेपालमा महँगो ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकामा कमाउनेलाई पनि नेपालमा महँगो !
प्रकाशित मिति : पुस १, २०७३ शुक्रबार
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा कसले जित्छ ?
गत महिना म नेपाल रहँदा प्राय जमघटमा यही प्रश्नको सामना गर्नु पर्यो । नेपाली समुदायबीच अमेरिकामा जति चासोको विषय थियो राष्ट्रपतिको निर्वाचन । नेपालमा त्यो भन्दा कम्ति थिएन ।